Dalxiiska miyiga ee Galicia: min Mariña Lucense ilaa Valdeorras | Wararka Safarka
Sameynta dalxiiska miyiga ee Galicia waa qaab kale oo lagu barto gobolkan quruxda badan ee waqooyiga Spain marka laga reebo booqashada magaalooyinkeeda waaweyn. Sababtoo ah, haddii kuwani ay qurux badan yihiin, Miyiga Galicia Waxay bixisaa muuqaal qurxoon iyo kala duwanaansho u dhexeeya buuraha iyo badda oo aan kaa tagi doonin danayn la'aan.
Tuulooyinka ku yaal meelaha dhaadheer, tuulooyinka kalluumeysiga quruxda badan iyo meelaha leh astaamo u gaar ah waxay ka kooban yihiin wax kasta oo aad ka heli karto dalxiiska miyiga ee Galicia. Haddii aad xiisaynayso talooyinkayaga, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Meelo Idyllic ah oo loogu talagalay dalxiiska miyiga ee Galicia
1.3 El Ribeiro, booqasho kale oo muhiim ah hadaad dalxiis miyi ku sameyso Galicia
1.5 Xeebta dhimashada ama da Morte
1.6 Gobolka Valdeorras
Meelo Idyllic ah oo loogu talagalay dalxiiska miyiga ee Galicia
Waxaan bilaabi doonnaa wadada aan ku marayno dhulka miyiga ah ee Galicia annagoo booqan doonna muuqaalka muuqaalka xiisaha leh ee Ribeira Sacra ka dibna loo beddelo gobol iyo muuqaal. Aan bilowno safarkayaga.
Sidaan kuu sheegnay, aaggan, wuxuu u dhexeeyaa waqooyiga gobolka Orense iyo koonfurta kan Lugo, waxaa lagu gartaa soo rogid muuqaal ah. Kuwaas waxaa ka mid ah Meelaha sil, kaas oo qaabeeya wabiga wabiga iyo sidoo kale kan meeriska A Cubela.
Kanaalka webiga wuxuu maraa inta u dhexeysa derbiyada waaweyn ee buuraha waadna dhex mari kartaa catamaran. Laakiin sidoo kale ka feker muuqaalka cajiibka ah ee ka soo baxa aragtiyaha ujeeddadan loo sameeyay.
Intaa waxaa dheer, aagga, oo sidoo kale caan ku ah khamri, waxaad ka heli kartaa magaalooyin taariikhi ah sida Monforte de Lemos, oo leh xaafaddeeda aan caadiga ahayn ee Yuhuudda iyo magaalada dhexe. Laakiin sidoo kale taallo diimeed sida kuwa keniisad ku taal San Vicente del Pino iyo dadka shacabka ah sida kan weyn dugsiga Our Lady of Antigua, oo loo baabtiisay "Galician Escorial" labadaba qaabkeeda Herrerian iyo cabirkeeda cajiibka ah.
Kuleejka Marwadayada Antigua ee Monforte de Lemos
Aaggan wuxuu ku yaal inta u dhexeysa sariirta webiga Navia, gudaha Asturias, iyo Sil, gudaha Galicia. Waxay leedahay kordhin ballaadhan maxaa yeelay, marka lagu daro, waxay ka timaaddaa qaybta bari ee Lugo ilaa inta Leonese Bierzo. Waa a dhul buuraley ah taasi waxay ku guuleysatay inay ilaaliso dhaqankeeda.
Astaamaha ugu badan ee iyaga ka mid ah waa waxa loogu yeero pallozas. Waa su'aal ku saabsan dhismayaasha dhir oval ama wareeg ah oo leh derbiyo hoose oo ay ku daboolan yihiin saqaf nuuca loo yaqaan 'conical type' oo lagu sameeyay jirrido galley ah Asalkiisu waa Roman-ka hor, si gaar ah Celtic, waxaana loo adeegsaday hoy ahaan illaa qarnigii XNUMXaad.
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato dhismayaashaan xiisaha leh, waad u safri kartaa tusaale ahaan Cebrero, tuulo Lugo ah oo dhererkeedu ka badan yahay XNUMX mitir. Waa magaalada ugu horreysa ee Wadada Santiago gudaha Galicia iyo kaniisadeedii ka horeysay Romanesque ee Santa María sidoo kale way taagan yihiin.
El Ribeiro, booqasho kale oo muhiim ah hadaad dalxiis miyi ku sameyso Galicia
Gobolkani wuxuu ku yaal gobolka Orense caasimadiisuna ku taal Ribadavia. Waxaa lagu maydhaa dhowr wabi sida Miño ama Arnoia oo waliba caan ku ah khamri. Xaqiiqdii, waad booqan kartaa mid ka mid ah khamriyeheeda badan.
Sidoo kale waa fikrad fiican inaad sii joogto mid ka mid ah kuwa badan daawooyinka. Laakiin sidoo kale waa aag ka buuxa taallo. Iyaga ka mid ah cajiib ah Kaniisad Trappist ee Santa María la Real de Oseira, oo asalkoodu ka soo bilaabmay qarnigii XNUMXaad kaniisaddiisuna leedahay astaamo u gaar ah qaabka loo yaqaan 'ogival Romanesque'.
Dhinaceeda, Ribadavia waxaad ka arki kartaa qalcaddii Sarmiento ah; magaalada qadiimiga ah ee hadhaaga xaafadda Yuhuudda; kaniisadda pre-Romanesque ee Saint Xes de Francelos iyo dhismaha weyn ee dhismaha Sanctuary of Our Lady ee Xariirka iyo Kaniisada Santo Domingo. Ugu dambeyntii, Sierra del Suido waxaad ku arki kartaa dhismayaal kale oo gaar ah: aqalada. Waa hoyga yar iyo cawsduur ee ay adhijirradu iskaga ilaalin jireen dhaxanta.
Sida magaceedaba ka muuqata, wuxuu daboolayaa marinka xeebta gobolka Lugo taas ayaa ka socota Ribadeeo up vicedo, qiyaastii. Xiddiga weyn ee aaggan waa Xeebta Cathedral, mid ka mid ah soojiidashada waaweyn ee dalxiiska miyiga ee Galicia.
Taalladaan dabiiciga ah waxaa laga helay kaniisadda Devesa, oo ka tirsan golaha Ribadeo. Waxayna ka kooban tahay dhagaxyo waaweyn oo taxane ah oo qaabab qafiif ah u eg qasnado duulaya jooga macbudyada waaweyn ee Gothic. Iyo sidoo kale godadka iyo marinnada ciidda ee u dhexeeya dhagxaanta waaweyn ee dhagxaanta. Haddii aad booqato, waa inaad tagtaa marka mawjadku hooseeyo, maxaa yeelay waa waqtiga ugu fiican ee la dhawrayo haybaddiisa.
Laakiin xeebta Catedrales maahan soo jiidashada kaliya ee Mariña Lucense. Ribadeo waxaad ku leedahay guryo Hindi ah oo qurux badan sida kuwa Munaaradda Moreno iyo qulqulka Eo. Dhinaceeda, Cervo waad booqan kartaa matxafka loogu talagalay taariikhda Dhoobada Sargadelos; Xannaanada waa Carlos V albaabka iyo Xove dhowr qalcado Celtic ah sida kuwa illade y Sanduuqa Shumaca.
Xeebta dhimashada ama da Morte
Horeba gobolka La Coruña waxaad leedahay mid kale oo ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan miyiga Galicia. Waa Costa da Morte oo ay ku jiraan barta galbeed ee ugu hooseysa Yurub. Waxay ku taalaa Cape Fisterra, Meel qurux badan oo bixisa aragtiyo qurux badan oo xeebta lafteeda leh xeebteeda roobaadka iyo qorrax dhaca u gaarka ah.
Laakiin sidoo kale waa aag hodan ku ah megalithic hadhaagii sida the dolmen ee Dombate iyo Castro de Borneiro. Waxaas oo dhan iyada oo aan la iloobin tuulooyinka kalluumeysiga quruxda badan ee ka kooban. Tusaale ahaan, Camarinas, Geela, Muxiya ama Muxía y Isku xidhka. Marka la soo koobo, dhul ay ka buuxaan khuraafaad iyo sheekooyin halyeeyo ah oo aan kugula talineyno inaad booqato.
Waxaan ku dhameyneynaa dalxiiskeenii dalxiis ee Galicia ee gobolka Valdeorras, oo ku yaal qeybta bari ee gobolka Orense. Sidoo kale waa dhul barwaaqo ah oo ku yaal khamri, laakiin sidoo kale waxay leedahay yaabab sida Beerta Dabiiciga ah ee Sierra de la Enciña de Lastra, halkaasoo aad sidoo kale ku arki doontid hadhaagii hore.
Deegaanka ugu muhiimsan ayaa ah Markabka Valdeorras, oo ku taal qaybta ugu hooseysa ee dooxada sil. Gurigan waxaa ku yaal tiro badan guryo sharaf leh, dhisme casriyeysan sida Casino iyo dhowr buundooyinka roman sida kan ka gudba wabiga Galir. Ku saabsan dhismaha diinta, waxay muujineysaa kaniisadda san mauro, wakiilka magaalada. Tan dhexdeeda, sawir alwaax ah oo ka mid ah Santo Cristo Nazareno ayaa lagu sharfayaa, taas oo, sida ku xusan halyeeyga, laga helay wabiga oo aan la goyn karin.
Gabagabadii, waxaan soo jeedinay lix meelood oo cajiib ah oo laqaban karo dalxiiska miyiga ee Galicia. Midkoodna kuma niyad jabi doono maadaama ay dhammaantood leeyihiin soo jiidasho u gaar ah oo aan la ilaawi karin. Ku dhiiran inaad ogaato meelahan sixirka ah ee Galicia.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways » Dalxiiska miyiga ee Galicia